Facebook Login Alerts ကို on ထားပါ | Online Service Center Myanmar -->
Facebook Login Alerts ကို on ထားပါ
"Facebook Login Alerts ( ကိုယ့်အကောင့်ထဲကို တခြားသူကဝင်ခဲ့ရင် ဘယ်လိုသိနိုင်မလဲ..? )
Account Hack ( Recovery လုပ်ပြီးခိုးယူ ) ခံရခြင်းမှကင်းဝေးအောင် လုပ်ထားသင့်တာလေးတွေ"
Facebook မှာ Security ပိုင်းအနေနဲ့လုပ်ထားသင့်တာလေးပါ
၂။ မိမိဖုန်းနဲ့ အသက်သွင်းထားပြီး Login Approvals ကို on ထားပါ။
Facebook Login Alerts ( ကိုယ့်အကောင့်ထဲကို တခြားသူကဝင်ခဲ့ရင် ဘယ်လိုသိနိုင်မလဲ..? )
Zawgyi Font Version =>
အကယ်၍ Facebook က သင့်အကောင့်လုံခြုံရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီး သံသယရှိပါက အကောင့်လုံခြုံရေးကို ပိုကောင်းအောင်ပြင်ဆင်ဖို့ ပြုလုပ်ပေးထားတဲ့ tool တွေရှိပါတယ်။ Login Alerts အကြောင်းပိုမိုလေ့လာကြည့်မယ်။ https://www.facebook.com/help/909243165853369
Unicode Font Version =>
အကယ်၍ Facebook က သင့်အကောင့်လုံခြုံရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီး သံသယရှိပါက အကောင့်လုံခြုံရေးကို ပိုကောင်းအောင်ပြင်ဆင်ဖို့ ပြုလုပ်ပေးထားတဲ့ tool တွေရှိပါတယ်။ Login Alerts အကြောင်းပိုမိုလေ့လာကြည့်မယ်။ https://www.facebook.com/help/909243165853369
မိမိတုိ့Facebook Account ေတြ Hack ခံထားရလုိ့ or Hack ခံရမွာ
ကြောက်လို့ ကြိုတင် ကာကွယ်ထားချင်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ် ကျွန်တော်များ OSC-Myanmar မွ
Hacked လုပ်ပြီး PA(Personal Attack) လုပ်ပြီး အရှက်ခွဲခံနေရသူများကိုတော့
အခမဲ့ အကူအညီပေးသွားမည်ဖြစ်ပြီး အခြား Hack လုပ်ခံထားရသူများရဲ့
မိမိလည်းအသုံးမပြုချင်တော့ဘူး Hacked(ခိုးယူသွား)သူလည်း အသုံးပြုလို့
မရတော့အောင် ပြုလုပ်ချင်တယ်ဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ Security Team မှ
အကောင်းဆုံးနဲ့ အသက်သာဆုံးနှုန်းဖြင့် ဝန်ဆောင်မှုပေးနေပါတယ်။
Security မြှင့်ချင်လျှင် မြှင့်ပေးပါတယ် အကောင့်ကို Security Checked
လုပ်ပေးတယ် မသင်္ကာစရာ Web App, Game App, Other App Log
တွေရှင်းပေးတယ် ကိုယ်ဝင်တာမဟုတ်ပဲ အခြားဆီတွေက ဝင်ထားတဲ့
Device, IP, Location Log တွေကို ရှင်းပေးတယ် Security မြှင့်ပေးတယ်
Security နဲ့ပတ်သက်တဲ့ ဗဟုသုတ တွေ ဆောင်ရန် ရှောင်ရန်တွေ သင်ပေးတယ်
Hack လုပ်မခံရအောင် Security အဆင့်တွေမြှင့်ပြီး ဘာတွေကို ဂရုပြုရမလဲ
သတိထားရမလည်းဆိုတာတွေကို သင်ပေးတယ် ဘာတွေဆောင်ပြီး
မိမိတို့ OSC-Myanmar အနေနဲ့ ဝန်ဆောင်မှုကို အသက်သာသုံး နှုန်းဖြင့်
ဝန်ဆောင်ပေးပါတယ် ငွေကြေး အနည်းငယ်လေး ကုန်ကျမှာကို မြင်မနေပါနဲ့
Account Hacked လုပ္ခံရျပီး PA(Personal Attack) ေတြလုပ္ခံရျပီး
အရှက်တကွဲ အကျိုးနည်းတွေဖြစ်တော့မှ အဖေကယ်ပါ အမေကယ်ပါတွေနဲ့
Security မြှင့်တာမှာ ကုန်ကျတာနဲ့ မကာမိတဲ့အဖြစ်မျိုးတွေ ဖြစ်ပါမယ်
ဒါကြောင့် မိမိတို့ Account များကို Security မြှင့်ပြီး သုံးကြပါလို့တိုက်တွန်း
ချင်ပါတယ် ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ Security မြှင့်တတ်ရင် မြှင့်ပြီးသုံးကြပါ
အကယ်၍ ကိုယ်တိုင်က ဘာမှမသိဘူး အဲ့ဒီ ဝန်ဆောင်မှုကို ယူချင်တယ်
ဆိုရင်ဖြင့် OCS-Myanmar ကို သတိရလိုက်ပါခင်ဗျာ။